Fandoavam-bola haingana ho an'ny Apple Watch Series 7 miaraka amin'ny charger mifanaraka amin'ny protokolan'ny USB Power Delivery na ny an'ny Apple | Vaovao IPhone
Fandoavam-bola haingana ho an'ny Apple Watch Series 7 miaraka amin'ny charger mifanaraka amin'ny protokolan'ny USB Power Delivery na an'ny an'ny Apple
Iray amin'ireo zava-baovao izay ampidirina ao amin'ny Apple Watch Series 7 ihany koa fa nanomboka nivarotra izy ireo androany dia mamaly haingana. Ity fiampangana ity dia mitaky farafahakeliny vitsivitsy hatao ary ny tena olana dia ny tariby famandrihana izay nampiasa USB A teo aloha, izay USB C ankehitriny ary ao amin'ny charger ihany.
Izany no antony anazavan'ny orinasa ireo fepetra takiana ilaina amin'ny fanatanterahana izany enta-mavesatra izany amin'ny hafainganam-pandeha avo kokoa. Amin'io lafiny io, ireo mpampiasa manana charger ofisialy Apple misy fifandraisana USB C dia afaka manao izany amin'ny maodely rehetra. Ireo izay tsy manana izany charger ofisialy Apple izany dia miankina amin'ny protokolan'ny USB Power Delivery avy amin'ny maodely 5W.
Ireo avy any Apple dia tsy maintsy manana herinaratra 18W farafaharatsiny mba hahafahany manolotra ity sarany haingana ity amin'ny famantaranandro vaovao, ireo izay tsy ofisialy avy amin'i Apple dia tsy maintsy manana ny protokol USB Power Delivery (USB-PD) afaka manolotra an'ity fiampangana ity izay manome fiampangana 80% amin'ny bateria manontolo ao anatin'ny 45 minitra fotsiny. Ny zava-dehibe eto dia ny fampiasantsika ilay tariby mihitsy izay ampidirina ao anaty boaty famantaranandro ary iray amin'ireo charger ireo.
Tokony holazaintsika indray izany ireo charger ireo dia tsy tafiditra ao anaty boaty ny famantaranandro vaovao fa azo atao ny mividy azy ireo amin'ny magazay Apple. Hitanay fa tena mampalahelo ity fihetsika ity na dia faly aza izahay fa ampian'izy ireo ihany ny USB C amin'ny fifandraisana misy tariby. Nanazava ihany koa i Apple fa ny famandrihana haingana ho an'ny Apple Watch Series 7 dia tsy misy any Arzantina, India na Vietnam, saingy tsy manome fanazavana momba io fetra io any amin'ireo firenena telo ireo.
Etsy ankilany, ny torohevitra eto dia ny fampiasana charger «vonona» hiantohana ny fitaovantsika. Aza adino fa misy ny charger kalitao eny an-tsena amin'ny vidiny mirary, tsy mila mividy amin'ny Apple ianao raha tsy tianao, fa Mampiasà charger sy tariby famenoana tariby miaraka amin'ny fanamarinana fiarovana mba hisorohana olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Fandoavam-bola haingana ho an'ny Apple Watch Series 7 miaraka amin'ny charger mifanaraka amin'ny protokolan'ny USB Power Delivery na an'ny an'ny Apple
WhatsApp dia manaparitaka backups miafina miafina
Shrinking no hatsikana Apple TV + vaovao avy amin'ireo mpamorona an'i Ted Lasso